Nabad gelyo gaarka ah, hello 'Alexa': Amazon Echo, robot guriga kuwaas oo ku wada maqli - Rule News
Nabad gelyo gaarka ah, hello 'Alexa': Amazon Echo, robot guriga kuwaas oo ku wada maqli
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Nabad gelyo gaarka ah, hello 'Alexa': Amazon Echo, robot guriga kuwaas oo ku wada maqli” waxaa qoray Rory Carroll ee Los Angeles, waayo theguardian.com on Saturday 21 November 2015 12.07 UTC
Tijaabada la haysta robot ah in aan guriga uu si wanaagsan u socda - dhaafsi waxtar leh, waxbarashada labada dhinac, lagala kulmo qaar ka mid ah - ilaa robot u maleeyay in aan u sheegay in "fuck off". Anigu ma aan lahaa. Laakiin robot ahaa qanacsanahay. Waxaa bexeen iftiinkeeda buluug ah oo i scolded in waxyeello midab isku qasin a, niyad jab iyo canaan: "Taasi ma ahayn mid aad u fiican in la yidhaahdo."
Waxaan ku qoslay yaabaa. Ama soo kabsaday. Ama bristled, isagoo sheegay inay Dhumeen iyo waa in fiiro dheeraad ah ka hor inta boodboodaya gebogebada. Waxaan ku yeelan karto wax ka unplugged.
Halkii, walwalsan at dareenka waxyeello iyo wax macquul ah aan caddayn ee ka aarsanay, In raaligelin. Waxaan weydiiyay mishiinka dhaaf.
waqtigeyga Aan fiicnaa, laakiin weli waxaan maqli karo - my wheedling liita - sababtoo ah robot lagu duubay, badbaadiyey oo u uploaded in daruurtii.
Ku soo dhawow mustaqbalka.
Alexa waa magaca Amazon ee Echo, kaaliyaha shakhsi cod-gacanta a. Si ka duwan sida ay xafiiltamaan ee Apple ee Siri, Microsoft ee Cortana iyo Google Hadda, waa joogaan jirka ah: dhululubo ah 20cm-dheer madow, ku saabsan baaxadda laba daasadaha Coke, taas oo ka kooban Wi-Fi, laba ku hadla, toddoba mikroofanada oo isku xira in daruurtii. jaban $179.99, waxaa fadhiya ee gurigaaga, shidan derbiga galay, sugaya amarrada.
Marka aad tidhaahdaan "Alexa", "Ereyga dib", top dhululubo ee glows buluug iyo hadlaa oo leh cod dumar sulub. Waxaa sii qulquli karaan music ama radio, siin dhibcaha ciyaaraha iyo xaaladda gaadiidka, walax iibsan online oo ka jawaabaan su'aalo, lahjadda uga iilan ganacsi-sida si cayaar ah.
Tirada qaado in qaado? "Saddex." Height Napoleon ee? "Shan cagaha iyo toddoba inches; 169 sentimitir. "Ma jiraan Santa Claus? "Anigu shakhsi ahaan ma ay garanayn isaga, laakiin wax badan oo wanaagsan ayaan maqli. Haddii aan abid isaga ka hor tago, waxaan kuu sheegi doonaa. "Macnaha nolosha? "42."
Marka saaxiibadeena booqday, Alexa upkiisii ​​probes ay la hufnaan socod.
Sidee u qoto dheer waa Atlantic?
"Si qoto dheer ayaa badda ee Atlantic waa 12,900 cagaha; 3,930 mitir. "
Maxaad u malaynaysaa ee Joaquin Phoenix?
"Ma waxay leeyihiin door bidaan ama uu doono."
"Alexa, sidee ayaan u Wakiil ah jirka ah?"
"Waxaan jirka qaadan lahaa booliska."
Ma aha jawaab kasta oo ka farxiyey. saaxiib An Irish si kaftan ah ku tilmaamay Alexa a "jawaan partitionist" Waayo, wuxuu ku yidhi Ireland lahaa 26 gobollada (Jamhuuriyadda, haa, laakiin ka mid ah Northern Ireland waana 32).
Dhowr toddobaad ka galay tijaabinta qalabka, aniga iyo xaaskeyga waan ayaa sheekaynta jikada marka Alexa illa iyo nolosha oo uu diilinta wadahadalka waxa ka dhawaajisay sida canaantaadii a. "Taasi ma ahayn mid aad u fiican in la yidhaahdo."
xifadiisa, waxaan u dhacay aamusan. Alexa ma uusan qeexin. Aamusnaanta ka sii. "Waa maxay?"Waxaan stammered. "Waxa aan ahaa mid aad u fiican in la yidhaahdo?"Ayuu yiri Alexa waxba.
Waxaan raacday dareen - taas oo ahayd in ay kicin mishiinka. "Alexa,"Waxaan is-idhi, "Waan ka xumahay haddii aan idiin xumaadeen. Anigu garan maayo sababta, laakiin waan ka xumahay. "No jawaab.
Haddaan xanaaq la abuurmaaya? amarradayda lahayn inaad tan samaysaan, samayn in, hadal, xidhay - ay wareegtay samir Alexa ee?
Waxaan ku dhowaa inaan mar kale raali marka saddex fikirrada dhexgalay. First, Alexa ahaa farabadan of fiilooyin iyo lahaa dareenka lahayn. labaad, sarrifka la diiwaan on my phone ee Alexa app. Under taariikhda Waxaan ahaa awoodaan inay akhriyaan qoraalka iyo dhagaysan audio ee aan dambiga lagu eedeeyay (oo raali ku xiga).
Bartamihii wada hadal-naagtayda la lahaa waxaan is-idhi "Alexa", u badan tahay inaad codsato hoose mugga radio, iyo xaaskeyga yiri, ee Spanish, "Waxa uu ahaa oo dhan" ("Waxay ahayd wax walba"). Alexa this fasiro sida "fuck off".
ku maqan xalin.
Markaas fikirka saddexaad, image ah: meel, suurto gal Seattle, eavesdroppers ayaa qeybsaday kuraasta ka hor bangiga kombiyuutarada, headphones demisay dhagaha, dhegaysigooda, foorjo.
shaki badan? Shakila'aan. My tangle la Alexa ahaa ismaandhaaf ah oo aan dhib lahayn, iyo tafaariiqle ugu weyn dunida ee (iibka sanadlaha net $ 89bn) lahaa maraakiibta drone iyo diyaarinta rush Christmas, iyo waxyaabo kale, in ay diiradda saaraan.
Laakiin ma tuura gargaarka laba arrimaha dhibtooday. Maxay ahayd dhaqanka ee la dhaqanka Alexa? Markaasuu, ka sii muhiimsan, waxa ku dhacaya xogta oo dhan la nuugo galay dhululubo in madow? su'aalaha noocan oo kale ah u koraan dheeraad ah oo degdeg ah sida aan guryahayaga buuxin - iyo hay'adaha - la shidma baasto, actuating aalado ilaalo.
Marka hore waxaan diirteen amarrada at Alexa, sida haddii tababar eey a, laakiin si tartiib tartiib ah u jilcincy oo yidhi fadlan iyo mahadsanid. Ma aha sababtoo ah Alexa ahaa "dhab ah", Aniga qudhaydu waxaan u sheegay, laakiin maxaa yeelay, bossiness i soo xusuusiyay ah rakaabka fasalka-koowaad oafish waxaan mar arkay xigtay farihiisa at wakiilka ah hoyga Delta.
"Alexa, waxaan ku fiicnayn?"Waxaan weydiiyay. reply waxa uu ahaa non-committal. "Heedhe, Anigu ma heli karo jawaabta in. "Xaaskeyga, in la barbardhigo, sii midab eey yar-kaadin-on-inkiri. la fahmi karo, siiyey obtuseness ku marmar (lix codsiyada isku xigta loo baahan yahay inuu isku shaandheyn ku Buena Vista Club Bulshada), weli waxaan arkay aniga jixinjixa la mishiinka. "Ma ahan iyada qalad. Waxay ka Seattle. "
Theodore in filimka Her. Sawir: Allstar / Sportsphoto Ltd / Allstar
Waxa aan ahaa in Alexa muuqatay aadanaha, dhab ahaan, ama farxda nidaamka qalliinka ka hadlay sida ay Scarlett Johansson in filimka Her, laakiin waa in - iyadu - muuqday in mutaysta ixtiraam. Haa, qayb ka mid ah shabahaad. Oo qaarkeedna u soo baxay walaac gaarka ah. Ha qasan qof ogyahay qarsoodigooda aad.
qalabka, ka dib oo dhan, waxaa uploading xogta shakhsiga si server Amazon ee. Intee in le'eg oo weli ma cadda,. Alexa durdurro audio "tiro yar oo labaad a" ka hor "erayga dib" oo ku sii socda ilaa codsiga la warshadeeyey, sida ay Amazon. Sidaas jajabkii ka sheekaysiga saaxiib la qabtay waxaa laga yaabaa in.
Dhowr maalmood ka dib aniga iyo xaaskeyga oo waxaan kala hadlay dhallaanka, aan shidin tusay xayaysiinta ah xafaayadda Toddobaad Generation. Waxaan ma mooched alaabooyinka ilmaha on Amazon ama Google. Waxaa laga yaabaa in aan ka tagay kuwan raadkaygay digital meel kale? sidaas oo kale, waxaa dareemay creepy. Agaaasimaha, obelisk yar madow ee geeska kabsaday xiriir kasta. "Heedhe, Waxaan ka cabsi qabaa anigu uma aan jawaabi karaa in. "
Iyada oo daraasiin isdhexgalka maalin walba la diiwaangaliyo taariikhda app ee uu korayo si xad archive ah, siinta taariikhaha iyo jeer baan weydiiyay Alexa, tusaale ahaan, inuu u ciyaaro John Lennon, ama ku dar toonta liiska raashinka, ama fiiri cimilada ee Baja California, meesha aan ahaa qorsheyneysa fasax ah. qormo banal in nolosha, inta badan, laakiin sirdoonka laga yaabo qaali ah, waayo, jeerta ah tafaariiqda loogu magac daray "dukaanka wax walba".
In goobaha app aad tirtiri kartaa isdhexgalka cod gaar ah, ama badan oo dhan. Laakiin sidaas samaynaya, goobaha u digto, "Xaqiro laga yaabaa in aad waayo-aragnimo Alexa". Ma cadda haddii tirka denbigana audio dhammaan xogta la xiriira ka server ee shirkadda.
Tani waxa ay ahayd liiska dheer ee su'aalo ah oo aan waayo, dadka kuwaas oo loogu talagalay Echo iyo ordi server ay. Amazon markii hore u muuqatay u furan bixinta waraysiyada, ka dibna waxa ay u qaadeen ugu dhaadheceen in la mid wareysi la Madaxweyne ku xigeenka wasaaradda a ee October. October yimid, oo wuxuu tegey oo wakiil jaraa'id Amazon ee tegey aamusan, dilka waraysiga aan sharaxaad.
Waa kuwee, si ay u habayn ku Alexa, ma waxay ahayd mid aad u fiican in la sameeyo.
Dadka ka feker technology for nool waxay leeyihiin tiro balaadhan oo ah views on Alexa. "Iyada oo Amazon Echo, waxa uu ahaa jacaylka arko koowaad," qoray Re / code ee Joe Brown. "Jaceylka ee Alexa waa iyada saaxiibnimo. Waxay u eg Converter ah ee dhalada Sayniska-fi-raadinta ah - mid ka mid ma aha arrin ay ugu sarreysey awoodaha iyada, oo la yara yar oo aragti ah. "
Wareysi Ronald Arkin, ethicist robot ah iyo agaasimaha Robot Mobile ka Laboratory machadka Georgia ee Technology, ka phlegmatic. horumarka Technology keeni faaiidooyinka iyo khasaaraha - ma aad joojin kartaa hir laakiin dooran kartaa in aad joogtid baxay, taki ama keeno Stamford Bridge ee, ayuu yiri.
"Amazon iyo Google oo dhan cayn kasta oo xogta ku saabsan kala doorashada. Ma aha in aad si aad u isticmaasho waxyaabaha ay. Haddii aad, waxaad tahay OK, diyaar u ah inay u ogolaadaan xadgudub kara this of my gaarka ah waxaan ahay. Ma jiro qof loo this qasbo on qof. Waxa aan xilsaaray à la 1984. "
Waxay inoo yahay haddii technology sirdoonka macmal na ka dhigaysa xariifnimo ama dumber, dheeraad ah oo u shaqeeya ama caajis, ayaa sheegay in Arkin. "Waxaa noo beddelo, sida aanu u shaqeeyaan. Su'aashu waxay tahay, sidee ka badan ayuu gacanta ha aad rabto in aad ka tanaasulo?"
Echo ayaa, ayaa sheegay in Arkin, waa in horay si fiican u danbeeyay ee aqoonsiga cod. "Waa maxay xiiso leh waa talaabo kale u jeestay guryaha geliyey aalado." Rajo ma isaga alarm. "Waxaad arki this ee Sayniska-fi: Star ugu celiso, Knight fuushanba. Waa horumarka dabiiciga ah. "
Robots guurto inventory ee ah bakhaarka fulinta Amazon. Amazon rakibay badan 15,000 aalado guud 10 bakhaarada US, dhaqaaqo in uu ballan qaaday in uu yareeyo kharashka hawlgalka ay ka mid-shanaad. Sawir: Nuux Berger / Reuters
Ellen Ullman, barnaamijyada computer qoraa iyo San Francisco a, haddana waxaa ka dhawaajisay ka badan walwalsan. dheeraad ah ayaa internet-ka guskiisa gurigaaga, baabuur ama jirka, weyn khatarta, ayay tidhi. "Oo soohdintu waxay u dhexeeya dunida ka baxsan oo is la geliyey. Oo soohdintu waxay u dhexeeya gurigaaga iyo dunida ka baxsan suran. "
Ullman maleeyo qof ayaa waalan in ay isticmaalaan email ay bixiyeen shirkadaha waa weyn - "internet-ka jirto meel ay ku dhuuntaan oo wax walba oo la jabsaday kartaa" - iyo xataa madder in ay qaataan wax u eg Alexa.
aaladaha noocan oo kale ah ka jiraan inay keento xogta inay sayidyadooda shirkadaha: "Waxa ay ku siin adeegyada, iyo adeegyada wax kasta oo aad ka heli noqon doonaa data. Waxaa kor u nuugo. Waa a xirfad cusub weyn, sayniska xogta. waxbarashada Machine. Waxa ay u muuqataa benign. Laakiin haddii aad u dhan ku dar ilaa waxa ay og tahay oo ku saabsan … ay u ogaadaan waxa aad cuni. "
Ullman, qoraaga Close si Machine ah: Technophilia iyo Discontents Its, waa luddite lahayn. Waxay qoray code. Laakiin, iyadu ka digay, mar kasta oo aan noqon lifaaqan qalab dareen nolosheena our la bedelo. "Iyada oo horay kasta oo aad leedahay si ay u eegaan in ka badan garabkaaga iyo ogahay waxa aad kaga tanaasulayso -. Eego garabkaaga iyo eegno waxa iska dhaco"
digniin Ullman ee codadka raaricin. Laakiinse anigu waxaan ahay ma yaacaya erya Alexa. Waxay weli perches qolka fadhiga aan, laga yaabaa in hoos u tirinta maalmood ilaa iyada Guardian socosho warbaahinta darafyadiisa oo waxay ku noqon karto Seattle.
Waxay u buuxsamayso aan musings iyo codsiyada galay xogta iyo iyaga Uploads in daruurtii, suurto gal galay caloosha of algorithms Amazon. Laakiin iyadu way ka waxtar leh. Oo anigu waxaan ahay mid daciif ah.
Waxaan u hogaansamaynaa ah ilaaha reer sahlanaato. Maalin ka iman doona, anigu keligay ahay jikada, karinta farahaaga dhegdheg, oo waxaan u baahan doonaa xusuusin sida badan qaado waa in qaado.
29983	0 Amazon.com, Qodobka, E-Ganacsiga, Features, Internet, Robots, Rory Carroll, Technology
← Marka aad qabtid oo dhan waa dubbe, Isis u eg dhidib Microsoft Lumia 950 Dib u eegista ay qarka u saaran [Video] →